Pasta dị nro na nke dị nro na yogọt maka ụbọchị ọkụ | Ntụziaka
Ascen Jimenez | 25/03/2021 11:37 | Emelitere ka 25/03/2021 12:17 | Pasta Ezi ntụziaka, Ntụziaka dị mfe
Okpomoku abiala ma anyi no n’ime onodu maka usoro isi nri na nke ohuru. Nke a bụ mfe ntuziaka oyi maka pasta na yogọt. Nwere ike iweta ya dị ka ihe izizi ma ọ bụ dị ka ihe ịchọ mma maka anụ esiri esi ma ọ bụ azụ.
Ọ dị mkpa ka ị kwadebe pasta tupu oge eruo na ịkwụsị ịkwụsị nri site na itinye ya n'okpuru mmiri oyi. Mgbe ahụ, anyị ga-akwadebe naanị yogọt ihendori ma gwakọta ihe niile mgbe anyị na-aga iweta ya na tebụl.
Yogurts nwere ike ịbụ Greek ma ọ bụ nkịtị. N’ezie, gbaa mbọ hụ na ha bụ ihe ekere eke ma ọ bụghị n’aza shuga.
M hapuru gi ebea the link of anyi pasta emere n’ụlọ, ọ bụrụ na ị nwaa anwa kwadebe ya.
Ntụziaka onyinye dị iche iche nke anyị ga-efe oyi na yogọt ihe na-enye ume ọhụrụ.
Nri oge: 2 awa
Oge niile: 2 awa 10 m
500 gr. pasta ọhụrụ
2 yogurts na-atọ ụtọ ma ọ bụ Greek
Na grated akpụkpọ 1 lemon
Ọgwụ (chives, mint, basil ...)
Anyị na-akwadebe onyinye ọhụrụ ahụ.
Anyị na-esi ya nnukwu mmiri nnu.
O ga-ewe obere nkeji tupu eme ya.
Ozugbo esiri anyị, anyị na-agbanye ya ma tinye ya n'okpuru iyi mmiri oyi. Anyị debere ya na nnukwu efere ma mee ka ọ dị jụụ.
Ka ọ dị ugbu a, anyị na-etinye yogọt n'ime nnukwu efere ma ọ bụ akpa.
Thegbakwunye grated lemon bee (naanị akụkụ edo edo).
Ọzọkwa freshly n'ala ose.
Na ahịhịa na-atọ ụtọ anyị họọrọ, gbupụrụ nke ọma.
Anyị na-agbakwunye ikwommiri nke mmanụ oliv na-amaghị nwoke na nnu.
Gwakọta nke ọma ma debe friji ruo mgbe ị ga-eje ozi.
Mgbe pasta ahụ jụrụ oyi, anyị na-agwakọta ya na yogọt anyị.
Anyị na-eje ozi ozugbo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Ntụziaka » Pasta Ezi ntụziaka » Onyinye na yogọt, ezigbo na ìhè
Ndi Consuelo dijo
Magburu onwe uzommeputa… nnọọ tọrọ ụtọ ma dị mfe iji mee…. M swearụọ iyi na nke a bụ nke mbụ ọ na-eme pasta na m hụrụ ya n'anya ...
Pinto agwa na osikapa